Dezie foto na mobile: ngwa kacha mma na ndụmọdụ | Gam akporosis
Dezie foto na ekwentị mkpanaaka: ezigbo ngwa na ndụmọdụ
Dika teknụzụ nke igwefoto igwefoto abawanyela na ogo, ọtụtụ ndị bụ ndị ọrụ kpebiri ịhapụ kpochapụwo dijitalụ kọmpat igwefoto iji mee ka smartphone gị bụrụ isi na naanị ngwaọrụ maka ịse foto na ịdekọ vidiyo.
N'ihi ngagharị a nke ndị ọrụ, ndị mmepe ngwa lekwasịrị anya na ịmalite ngwa maka dezie foto na ekwentị mkpanaaka, ngwa ndị na-enye anyị ohere ịme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ngbanwe ndị anyị jirila kọmpụta.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otu esi eji ezigbo ekwentị gị were foto dị mma, otu esi ewere ezigbo selfie, were foto nri, were mobile gi were ezigbo foto o esi mee ka a video na foto na music na mobile, Na Androidsis ị ga-ahụ otu esi eme ka o kwe omume. Ozugbo anyị were foto anyị ga-aga n'ihu dezie ha.
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere n'aka anyị ọtụtụ ngwa na-enye anyị ohere idezi foto, agbanyeghị, imirikiti n'ime ha anaghị enye anyị atụmatụ na arụmọrụ anyị nwere ike ịchọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie foto na ekwentị mkpanaaka, n'okpuru anyị na-egosi gị ngwa kachasị mma iji mee ya yana ụfọdụ ndụmọdụ ị kwesịrị iburu n'uche.
1 Android foto edezi ngwa
1.1 Foto Photoshop
1.4 Foto Google
1.5 Onye ode akwukwo Polarr
2 Ndụmọdụ maka idezi foto
2.1 Iwu nke uzo ato
2.2 Wide angle: ezigbo enyi
2.3 Emegbula ndị nzacha
2.4 Nwa na ihe oyiyi oyiyi
2.5 Gbanwee ọkụ na iche
2.6 Mee ka onyinyo ahụ dịzie
2.7 Wepu ihe na-enweghị isi ma ọ bụ ndị mmadụ
Android foto edezi ngwa
A na-akpọ ụdị Photoshop nke mobile Express, ụdị nke na-enye anyị ọtụtụ ọrụ anyị nwere ike ịchọta na desktọọpụ version lekwasịrị anya na nhazi onyonyo, dị ka ịtụgharị na ịkpụpụta onyonyo, belata mkpụrụ foto iji melite nkọ ha, itinye blu na ihe ma ọ bụ ahịrị, na-agbakwunye akwụkwọ mmado, ederede ederede ...
Dị ka ezigbo ngwa nke na-etu ọnụ, Photoshop Express na-enye anyị ohere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nzacha iji hazie foto anyị, ihe nzacha nke na-enye anyị ohere itinye ihe nkiri, mmemme, ọ joyụ na foto. Anyị nwekwara ike gbanwee ọnọdụ agba agba, ọkụ, ụda, iche, agba ...
Dị ka a ga - asị na ọrụ ọ na - enye anyị pere mpe, anyị nwekwara ọtụtụ ọrụ anyị nwere okpokolo agba na ikike ịmepụta comps ihe oyiyi (collages), kpochapụ ihe ndị a na-achọghị ... Ọ dịghị mkpa ka onyonyo ahụ dịrị na ngwaọrụ ahụ, ebe ọ na-enye anyị ohere ịnweta onyonyo ndị anyị debere na Google Photos, Dropbox, Facebook, Adobe Creative Cloud ...
Photoshop Express dị maka gị budata n'efu ma tinyeghị ụdị nzụta n'ime ya. Ngwa a bụ otu n'ime echiche kacha mma nwere na Storelọ Ahịa Play dị ka ngwa iji dezie foto.
Onye nchịkọta akụkọ foto Photoshop Express
Otu n'ime ngwa izizi iji rute ahịa ngwaọrụ mkpanaka iji dezie foto bụ Snapseed, ngwa nke dị zụtara site na google na na ebe ọ bụ na ọ gara n'ihu na-emelite ka ọ bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka edezi foto na ekwentị mkpanaaka.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa iji tinye nzacha, Snapseed bụ ihe ị na-achọ, ngwa nke na-enye anyị ngwaọrụ 29 iji bugharia ma wepụta ihe onyonyo, dozie ọnọdụ ahụ, gbanwee ụda, saturation, nguzo ọcha, nkọ ...
Ọ gụnyekwara ọrụ na-enye anyị ohere iwepu ihe ndị a na-achọghị site na njide, gbakwunye ederede na ihe oyiyi, gbanwee akụkụ ahụ iji dozie nchapụta na iche, mebie ndabere nke ihe oyiyi ahụ, belata mkpọtụ nke foto ahụ, tinye okpokolo agba .. .Ọ bụ dakọtara na Raw faịlụ, faịlụ na ozugbo dezie anyị nwere ike mbupụ na usoro JPG ma ọ bụrụ na ị na-achọ a nchịkọta akụkọ foto nke na-adịghị eweda ogo ahụ, ị na-achọ Snapseed.
Snapseed dị maka gị budata n'efu
Otu n'ime ngwa kachasị mma anyị hụrụ na Storelọ Ahịa Play iji jikwaa ọbá akwụkwọ anyị na mkpanaka ma dezie foto na ekwentị na-abịa site n'aka Adobe, onye nrụpụta nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile Photoshop, nchịkọta akụkọ foto kacha mma dị na ahịa (ụdị nke mbụ kụrụ ahịa na 1990).
Site na Adobe Lightroom anyị nwere ike ịgbanwe onyonyo a na-ahụ anya na onyogho dị ike n'ihi ọnụọgụ nhọrọ edezi nke na-enye anyị ohere ịhazigharị ọkụ, iche, agba, dozie elekwasị anya, ụda, saturation, dezie foto site na mpaghara iwepu ihe ndi achoghi ...
Nke a bụ otu n'ime ngwa ole na ole na-enye nkwado maka faịlụ RAW, Ọkpụkpọ nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ụkpụrụ onyonyo dị ka a ga - asị na anyị na - ejide oge ahụ. Adobe Lightroom dị maka nbudata n'efu mana jikọtara ọtụtụ nzụta ihe eji arụ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ọrụ igwe ojii ọzọ Adobe na-enye anyị.
Foto Lightroom- & Onye ndezi vidiyo
Ọ bụ ezie na arụmọrụ nke Foto Google lekwasịrị anya na ikwe ka anyị chekwaa otu foto niile n'efu Ihe anyị ji ekwentị anyị eme, ọ na-enye anyị ngwaọrụ dị iche iche mgbe anyị na-edezi foto anyị.
Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịgha mkpụrụ na foto agbajiri, mana ọ na-enye anyị ohere ghara ịma ndabere nke foto (ezigbo ọrụ maka eserese), mana na-enyekwa anyị ohere itinye ederede, tinye ihe nzacha, tinye akara mmiri ...
Onye ode akwukwo Polarr
Polarr Photo, na mgbakwunye na inye a editọ free site na ebe nrụọrụ weebụ gị, ọ na-enye anyị mbipute maka gam akporo, ngwa anyị nwere ike ibudata n'efu, mana nke ahụ na-agbakwunye usoro ịzụrụ ihe n'ime ngwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ị nweta ọtụtụ ngwa.
Ejiri ngwa a site n'inye anyi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nzacha na mmetụta nke ụdị dị iche iche inye mmetụ mbụ na foto anyị. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịmegharị ihe oyiyi, kpochapụ ihe ndị na-achọghị, dozie ọkụ, saturation, iche, akụkụ, belata ọka ...
Ndụmọdụ maka idezi foto
Iwu nke uzo ato
Mejupụtara na foto bụ ihe niile. Mgbe anyị na-ese foto, anyị kwesịrị iburu ya n'uche mgbe niile, ebe ọ bụ na site na ihe mejupụtara, anyị nwere ike ịkọ akụkọ, kọwaa ihe oyiyi ahụ n'ụzọ zuru oke, debe onwe anyị n'ọnọdụ ... Iwu nke ụzọ atọ na foto na-ekwu na etiti nke nlebara anya ha kwesịrị edobe ya na uzo nke ihe omuma a na-ekewa foto n'ime ato ato site na elu rue ala na aka ekpe rue aka nri.
N'ezie, ọtụtụ bụ mobiles ndị na-enye anyị ohere tinye grid a na ngwa igwefoto, okporo nke na-enyere anyị aka icheta ebe anyị kwesịrị idowe ihe ndị bụ isi na mbiet ahụ, ebe etiti nlebara anya. N'iburu iwu a n'uche, mgbe ị na-edezi foto, anyị nwere ike iwe ya (idebe usoro) iji lekwasị anya na isi ihe ndị a. Ọ bụghị naanị na onye na-achị achị a na-ese foto, mana eji ya ese ihe.
Ọ bụrụ na anyị na-eme odida obodo foto, usoro nke atọ nwere mkpa pụrụ iche, ebe ọ na-enye anyị ohere inweta njide dị egwu. Ọ bụrụ na anyị ewere foto nke odida obodo ebe mbara igwe na ụwa / mmiri hà nhata, anyị ga-egbutu ihe oyiyi ahụ ka elu igwe na-anọchi anya 2/3 ụzọ abụọ nke ihe oyiyi ahụ na ụwa / mmiri fọdụrụ.
Wide angle: ezigbo enyi
Mgbe anyị na-edoghị anya nke ọma na ihe anyị chọrọ ịse foto ma anyị achọghị ịhapụ ihe ọ bụla, ọ bụrụhaala na ngwaọrụ nwere obosara sara mbara, ọ ga-adị mma iji ya. Na nhazi oge, anyị nwere ike dobe ihe oyiyi iji chọta egwuregwu zuru oke, nchikota nke aghaghi iso usoro nke ato.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị anaghị agụnye oke obosara, naanị ihe ga-eme pụọ ebe ahụ Anyị chọrọ foto, ka oge na-aga na mbipụta ahụ, iji gosipụta nke kachasị mma.
Emegbula ndị nzacha
Nzacha, maka Instagram. Nzacha na foto, naanị ekwesighi iji ya, na mgbe anyị jiri ha, ha ga-abụrịrị nzacha akọwapụtara nke na-eme ka onyinyo ahụ dịkwuo mma ma ọ bụ tinye mmetụ pụrụ iche nke anyị na-enwetabeghị mgbe anyị jidere ya.
Nwa na ihe oyiyi oyiyi
Mgbe ị na-ahazi ihe oyiyi, anyị ga-eburu n'uche na enwere ike ịgbanwe ihe oyiyi na oji na ọcha. Na eserese tumadi, oji na oji tinye mmetụta dị egwu na anyị agaghị ahụ na a na agba oyiyi. Ọ bụrụ na anyị ejide ihe ochie, ndị agadi, nwere ọdịiche dị ukwuu ebe anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ebe gbara ọchịchịrị, oji na ọcha dị mma.
Mgbe ị na-etinye ihe nchacha na oji, anyị ga-enwerịrị nhọrọ site na itinye ike tinyekwuo ma obu obere ike na oji. Ọ bụrụ na ngwa ahụ ekweghị ka anyị gbanwee ike nke oji, ọ nwere ike anyị agaghị enweta nsonaazụ anyị nwere ike ịchọ.
Gbanwee ọkụ na iche
Tupu ịmalite idezi foto, ihe mbụ anyị ga - eme bụ dozie ọkụ na iche. Ọ bụrụ na ngwaọrụ anyị na-enye ohere ịnwụde na usoro RAW, ọ ka mma mgbe niile ịmebe usoro a mgbe ị na-ese foto, ebe ọ na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ nhazi post mgbe ị na-agbanwe ụkpụrụ nke foto anyị na-enwetụbeghị n'oge njide. ma ọ bụ na anyị enwebeghị ike ịgbanwe ha.
Mee ka onyinyo ahụ dịzie
Ọ bụrụ na ese foto a gbagọrọ agbagọ n'ihi na ọ nyere anyị nsonaazụ anyị na-achọ, ọ dịghị mkpa ịgbatị ihe oyiyi ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ihe mbụ ị ga-eme, na mgbakwunye na idozi ọkụ na ọdịiche, bụ ịgbatị ya. Onyogho gbagọrọ agbagọ, n’enweghi ihe kpatara eji kwado ya, agaghị abụ ezigbo foto.
Wepu ihe na-enweghị isi ma ọ bụ ndị mmadụ
Otu n'ime mmejọ nke ọtụtụ ndị na-eme mgbe ha na-edezi ihe oyiyi ha bụ ewepụla ihe ndị ahụ ma ọ bụ ndị fọdụrụ na foto ahụ. N'ụzọ doro anya, ịnweghị ike iwepu mmadụ niile na-egosi n'azụ ma ọ bụrụ na anyị nọ na square (yana ogologo oge enwere ike ime ya n'oge njide), mana ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya ma ọ bụrụ na mmadụ, anụmanụ ezoro ezo , enwere mkpofu ahịhịa, ụfọdụ mkpofu n'ala ...
Ihe ndị a emetụta oyiyi mejupụtara, yabụ mgbe ọ bụla enwere ike anyị kwesịrị ikpochapụ ha. Imirikiti ngwa ndị anyị tinyere na ndepụta a, na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ a na-enweghị achọpụta ọdịiche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Dezie foto na ekwentị mkpanaaka: ezigbo ngwa na ndụmọdụ
Ndị na-ahụ maka mkpuchi bụ ndị nkịtị na-abaghị uru na arụmọrụ dị mma
Samsung meghere mmemme beta Otu UI 3.0 na gam akporo 11 na Galaxy S20